HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo safka hore ugu jirta saxiixa xiddiga Liverpool Naby Keita.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay safka hore si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Naby Keita , kaasoo mustaqbalkiisa Anfield uu mugdi ku jiro.
26 jirkaan ayaa 11 jeer u saftay kooxda Jurgen Klopp horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya lix ka mid ah kulamadaas ayaa ku soo bilowday 11-kii kulan ee ugu dambeeyay.
Keita ayaan wax kulan ah u safan doonin Reds bisha soo socota midkoodna, maadaama uu ku maqan yahay waajibaadka caalamiga ah ee xulka Guinea u matalaya koobka Qaramada Afrika.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Isbaanishka ee El Nacional , kooxda Xavi ayaa haatan ugu cadcad saxiixa xiddiga khadka dhexe, iyadoo Klopp uu sidoo kale sheegay inuu doonayo inuu Keita ka tago kooxda.
Kooxda Jarmalka ee Bayern Munich ayaa lala xiriirinayay Keita ka hor inta uusan Liverpool uga soo dhaqaaqin RB Leipzig, waxaana mar kale la rumeysan yahay inay ka mid yihiin kooxaha xiiseynaya, oo ay ku jiraan West Ham United , AC Milan iyo Roma .
Keita ayaa yimid Anfield 2018 ka dib markii ay Reds ogolaatay inay bixiso 48 milyan ginni oo lagu burburin karo qandaraaskiisa, qandaraaskiisuna ma dhacayo ilaa xagaaga 2023.